Yakakwira Mhando Hex bhaudhi Mugadziri uye Mutengesi | Yanzhao
Hex mabhaudhi anoshandiswa kusunga maviri kana anopfuura mativi pamwechete kuti vagadzire musangano pamwe nekuti haugone kugadzirwa sechikamu chimwe chete kana kubvumidza kwekugadzirisa uye kugadzirisa disassembly.Hex bolts anonyanya kushandiswa mukugadzirisa uye kuvaka basa. ivo vane hexagonal musoro uye vanouya nemuchina tambo dzesimba uye dzakaomarara kubata. Ivo vanouya munzvimbo dzakasiyana siyana dzakasiyana hex bhaudhi saizi yekushandisa tsika zvichienderana nezvinodiwa zvidimbu. Aya maHex Bolts anouya mune anti-ngura simbi isina simbi, alloy simbi uye kabhoni simbi zvinhu zvinovimbisa kuti chimiro hachishayi simba nekuda kwengura. Zvichienderana nehurefu hwebhaudhi, inogona kuuya neyakajairwa threading kana yakazara threading.
Hex mabhaudhi anogona kushandiswa kune akawanda akasiyana maficha anosanganisira kusungira huni, simbi, uye zvimwe zvekuvakisa mapurojekiti akadai sedoko, mabhiriji, migwagwa mikuru, uye zvivakwa. Hex mabhaudhi ane misoro yakaumbirwa anowanzo shandiswa seanotungamira anchor bolts.
Nhema-oxide simbi screws iri zvinyoro ngura inodzivirira munzvimbo dzakaoma. Zinc-yakafukidzwa simbi screws inodzivirira ngura munzvimbo dzakatota. Nhema ye-ultra-corrosion-resistant-coated steel screws inopesana nemakemikari uye inomira maawa chiuru emunyu spray.Coarse tambo ndiwo indasitiri standard; sarudza aya masikuru kana iwe usingazive shinda pa inch. Shinda dzakatsetseka uye dzakawedzera-dzakapatsanurwa dzakanyatsopatsanurwa kudzivirira kusununguka kubva kudengenyeka; iyo yakanakisa tambo, zvirinani kuramba.
Musoro webhaudhi wakagadzirirwa kukwana ratchet kana spanner torque zvipanera zvinokutendera kuti usimbise bhaudhi kune ako chaiwo maratidziro. Hex misoro mabhaudhi anowanzo shandiswa kugadzira rakasungwa mubatanidzwa, mune iyo yakamisikidzwa mugodhi inonyatsoenderana inowirirana yakaboorwa gomba kana nati. Giredhi 2 mabhaudhi anowanzo shandiswa mukuvaka kwekujoinha zvinhu zvehuni. Giredhi 4.8 mabhaudhi anoshandiswa mune zvidiki injini. Grade 8.8 10.9 kana 12.9 mabhaudhi anopa yakakwirira tensile simba. Imwe yekubatsira mabhaudhi anosunga ane pamusoro pemasimbi kana mariveti ndeyekuti iwo anotendera nyore nyore disassembly yekugadzirisa uye kugadzirisa.
Pashure: Drywall screws
Zvadaro: Flange Musoro Bolts
Dema Kuputira Hex Bolts
Nhema Oxidation Hex Bolts
Hexagon Socket Musoro Bolts
Yakakwira Simba Hex Bolts
Nhema Oxidation Hex Bolts, Hexagon Socket Musoro Bolts, Din6921 Flange Nuts, Dema Kuputira Hex Bolts, Yakakwira Simba Hex Bolts, Bolts,